Mason Greenwood Oo Ku Qasbay Ole Gunnar Solskjaer Inuu Beddelo Qorshihiisa Suuqa - Gool24.Net
Mason Greenwood Oo Ku Qasbay Ole Gunnar Solskjaer Inuu Beddelo Qorshihiisa Suuqa
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa qirtay in qorshihii suuqa ee Manchester United uu isbeddel ku dhacay, kaddib wacdarihii uu muujiyey Mason Greenwood.
Da’yarka Red Devils ayaa bandhig cajiib ah muujiyey intii uu horyaalku dib u bilaabmay, waxaanu dhaliyey afar gool saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League.
United ayaa hore loola xidhiidhinayay inay lacag badan suuqa gelin doonto, waxaana xiddigaha farta loogu fiiqayay ka mid ahaa Jadon Sancho oo 100 milyan oo Gini ay iibkiisa ku xidhay Borussia Dortmund, laakiin Solskjaer ayaa hadda qiray in aanay kooxdiisu u baahnayn inay qasnaddeeda u furto ciyaartooyo cusub oo ay soo iibsato.
Soo bixitaanka Mason Greenwood ayuu xusay inuu ka joojinayo Red Devils inay u dhaqaaqdo saxeexa laacibiintii ay hore isha ugu hayeen, waxaanu yidhi: “Ilama aha inaad rajaynaysaan in lix ciyaartoy ay imanayaan – waxaan ogahay in aanay lix ciyaartoy iman doonin. Kaliya ciyaartoyda uma soo qaadan karno inaanu dad u baahanahay.
“Mason Greenwood ayaa aniga ciyaartoy ii ah. Waa 18 jir, waxaanan doonayaa inaan siiyo fursaddii uu ku noqon lahaa ciyaartoy weyn oo kooxdan ah.”
Ole Gunnar Solskjaer waxa kale oo uu magacaabay laba ciyaartoy oo kael oo da’yar ah oo kooxdiisa jooga, kuwaas oo sannado badan uu ku xisaabtamayo inay guulo gaadhsiiyaan Red Devils, waxaanu yidhi: “Waxa isaga la mid ah Marcus Rashfrod oo 21 jir ah iyo Diogo Dalot oo 20 jir ah. Ciyaartoydan ayaa heli doona fursad, taas ayaana saamayn doonta ciyaartoyda xirfaddooda sii dhamaysanaya.”